RAW: Roman Reigns oo balan qaadaya inaysan dhacaynin wixii dhacay Wrestlemania – Filimside.net
RAW: Roman Reigns oo balan qaadaya inaysan dhacaynin wixii dhacay Wrestlemania
Warbixintaan Waxaa Soo Diyaariyay Jabril Abdikadir Farah
Roman ayaa goobta imaanaya isagoo sheegaya inuu isagoo joogo laakiin Brock Lesnar uusan joogin uuna mar kale wajihi doono brock lesnar dhacdada The Greatest Royal Rumble ka dhici doonta Saudi Arabia 27 April.
Roman oo hadalka wata waxaa arbushaya Samoa Joe oo usbuucii hore sidan oo kale oo arbushay . Samoa ayaa roman ku dhahaya waxad tahay nacas hadad halkaan taagan tahay oo ma garanaysid sida howsha loo soo afjaro.
Samoa ayaa roman tusaya video goos goos ah oo ah waqtiyadii kala duwanaa oo Brock lesnar isaga ciqaabay roman ayaa ka caroonaya kuna dhahaya samoa hadad wax isku hayso iskeen ringaha.
Laakiin samoa aya dhahayo waqtigayga ayan sugaya oo waxay balan san yihiin bandhiga backlash 6 may oo roma waxaa kaga soo horeyn doono bandhiga saudi ka dhici doona oo uu wajihi doono Brock lesnar ciyaar ay taalo suunka universal championship.
Brock lesnar ayaa soo laabanaya isniinta soo aadan ka hor 6 maalin inta ay is wajihin roman oo ay balan san yihiin.
W/D: Jabril Abdikadir Farah
Waxaa Aqrisay 430